Iindaba -I-Euroshop 2020 kunye nokuKhanya kweCouleur
Esi sisibane seCouleur sithathe inxaxheba kwi-EuroShop, ushicilelo lowe-2020 lwecandelo lentengiso elibaluleke kakhulu elinike ithuba leCouleur Lighting ukubonisa ukuvela kwayo kunye nezinto ezintsha. Sifuna ukubulela wonke umntu otyelele umnquba wethu e-Euroshop eDusseldorf. Ukubeka ubuso kumagama kunye nokwazisa uCouleur Lighing ezintsha izinto ezikhutshwe kulo nyaka yayiyinto eyonwabisayo! Ukukhanya kweCouleur kweqela kuboniswe ubuchule babo bobuchwephesha bokwazisa imveliso yethu kubathengi bethu.
Simeme abathengi bethu ukuba basebenzisane iminyaka emininzi ukutyelela umnquba wethu, kunye nabathengi abaninzi abatsha batyelela umnquba wethu.
Ukukhanya kweCouleur njenge-manufacuturer yobuchule be-Strip Lighting yeNtengiso yebhokisi yokuKhanya ngaphezulu kweminyaka eli-10, kukho amakhulu aliqela ohlobo lwe-LED Strip Light.
Kukho uninzi lwe-LED Strip Light e-Euroshop, eziye zavunywa ngamxhelo mnye ngabathengi.
Umboniso wethu uphumelele. Umnquba wethu utsala abathengi abaninzi, kuba umgangatho wemveliso yethu kunye nolwazi lwethu lobungcali.
Zininzi izinto ezingaqinisekanga, Sisaphehlelela imveliso entsha-iRGB yeDynamic Curtain LED Strip, etsala inani elikhulu labathengi kwaye yongeza imibala emihle kwindlwana yethu.
Umgangatho wokukhanya kweemveliso zethu kunye nezibane ezikhanyisiweyo ze-Edge nawo ufumene indumiso ebanzi evela
Ukongeza, besisungula iqonga lemiboniso yethu emitsha-ye-RGB Curtain LED Strip kwaye ifumene ingxelo entle evela kubakhenkethi be-EuroShop.
I-RGB Curtain LED Strip sisizukulwana esitsha semiboniso ye-LED edibanisa imifanekiso eprintiweyo yelaphu kunye neziphumo zokuhamba kunye noopopayi obunamandla obutsala umdla woluntu ngokuzisa izinto ezibonakalayo eziprintiweyo ebomini.
Inokusetyenziselwa ibhokisi ekhanyayo, luhlaziyo lokwenyani kunxibelelwano olusevenkileni oluya kubonelela ngamava okuthenga kunye nokukhumbula abathengi bakho.
Ikwasebenzisela ukuhombisa ikhaya, iBar, ihotele kunye neevenkile zevenkile. Iya kubamba amehlo omntu, kwaye iya kukunceda.
I-RGB Curtain LED Strip inokuba ngokwesicelo sakho ukuze icwangciswe, kwaye utshintshe umbala ohlukileyo oyifunayo.
I-RGB Curtain LED Strip inezibonelelo ezithile: ukufakwa ngokulula, ukubonwa kunokuhlaziywa ngokukhawuleza, ukugqitywa okuninzi kuyafumaneka kwaye kukuhanjiswa ngokukhawuleza ukunciphisa iindleko zothutho.
I-Euroshop luhambo olungalibalekiyo, sinokulinda ukwahlukana kwi-Euroshop2023 elandelayo, wamkelekile ukukhenketha umnquba wethu.